स्वास्थ्य पेजगर्भावस्थामा कोभिड खोप लगाउनु कति सुरक्षित ? - स्वास्थ्य पेज गर्भावस्थामा कोभिड खोप लगाउनु कति सुरक्षित ? - स्वास्थ्य पेज
गर्भावस्थामा कोभिड खोप लगाउनु कति सुरक्षित ?
नेपालगन्जः कोभिड–१९ को महामारी सुरु भएदेखि नै गर्भवती महिलाहरूमा यसले पार्ने असरबारे होसियारीसाथ ध्यान दिइएको छ ।
कुनै पनि नयाँ सङ्क्रामक रोग लागेमा गर्भवती महिला र उनमा भएको भ्रूणलाई असर गर्न सक्छ भन्ने विश्वासका कारण महिलालाई सङ्क्रामक रोगबाट सुरक्षित राख्न खोप वा औषधिको प्रयोगबारे अध्ययन गरिएको र १८ महिनाको अनुसन्धानपछि डाक्टर तथा अनुसन्धानकर्ताहरूले यसको खतराबारे सान्दर्भिक व्याख्या गरेका छन् ।
अध्ययनले अन्य व्यक्तिजस्तै केही गर्भवती महिलाले कोभिडको गम्भीर समस्या भने अनुभव गरेको पाइएको छ । आमाबाट यो भाइरस गर्भमा रहेको भ्रूणमा पास गर्ने सम्भावना पनि निकै दुर्लभ भेटिएको यस अध्ययनले देखाएको छ । तथापि, कोभिड भएका केही गर्भवती महिलाहरू भने कोभिडको सङ्क्रमणपछि असाध्यै अस्वस्थ भएको पाइएको छ । यस्तो अवस्थामा उनीबाट जन्मने बच्चा अपाङ्ग हुने वा मृत जन्मिने खतरा बढ्छ । सामान्य अवस्थामा जस्तै मोटो वा अश्वेत वा एसियाली गर्भवती महिलाहरूलाई पनि गम्भीर कोभिड हुने सम्भावना बढी हुन्छ ।
सन् २०२१ को जुलाईपछि बेलायतमा हरेक पाँच कोभिड सङ्क्रमित बिरामी, जो गम्भीर बिरामी भएपछि भेन्टिलेटरको सहायतासमेत लिनुपर्यो, मध्ये एक बिरामी गर्भवती रहेको भेटिएको छ ।
यसको अर्थ, यस अवधिमा १६ देखि ४९ वर्षका ९प्रजनन उमेरका० गहन उपचारमा लागेका एक तिहाइ महिलाहरू गर्भवती थिए । यी महिलाहरूलाई खोप लगाइएन, जसले गर्दा तिनीहरूले यति धेरै गम्भीर घटनाहरू बेहोर्नुपरेको अनुसन्धानले बताएको छ । यी महिला बेलायतमा खोप कार्यक्रम सुरु हुँदा धेरैजसो गर्भवती भइसकेका थिए र खोप लिएका थिएनन्, किनकि त्यसो गर्ने कुनै स्पष्ट सिफारिस गरिएको थिएन ।
साधारणतया, कोभिड खोप लगाएको व्यक्तिलाई सार्स–कोभ–२ भाइरस सङ्क्रमण हुने सम्भावना कम रहेको र संक्रमण हुँदासमेत गम्भीर कोभिड विकास हुनदेखि अत्यन्तै सुरक्षित रहेको पाइएको छ सर्वेक्षणले देखाएको छ ।
एमआरएनए कोभिड खोप जस्तै यी खोपहरूले प्लेसेन्टा पार गर्दैनन्, जसले बच्चामा प्रभाव पर्ने खतरालाई कम गर्छ । गर्भावस्थामा नियमित रूपमा दिइने यी अन्य खोपहरूले बच्चालाई कुनै प्रतिकूल असर नपार्ने भएकोले कोभिड खोपले पनि असर गर्छ भन्ने सुझाव दिने कुनै कारण छैन ।